अधिकारीको काव्यकृति ‘भरियाको भूगोल’ सार्वजनिक - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
ट्रम्पद्वारा ओबामा प्रशासनको निर्णय खारेज, ९ हजार नेपालीले अमेरिका छाड्नुपर्ने
प्रधानमन्त्री डोको र कोदालो बोकेर श्रमदानमा खटिने
छिमेकी जिल्ला समेटेर एकीकृत विकास गर्नेः अध्यक्ष दाहाल
भाग्यले बाँचेकाहरु प्रर्दशन
अधिकारीको काव्यकृति ‘भरियाको भूगोल’ सार्वजनिक
शनिबार, बैशाख १६, २०७४
काठमाडौँ । प्रसिद्ध कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारीको नवीनतम् काव्यकृति ‘भरियाको भूगोल’ सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालयले प्रकाशनमा ल्याएको उक्त काव्य कृति तीन वर्षपछि पुनः प्रारम्भ गरिएको पलेटीको नयाँ शृङ्खलामा सार्वजनिक गरिएको हो ।
कवि अधिकारीले ‘भरियाको भूगोल’ पहिलो प्रति आफूभन्दा पछिल्ला पिँढीका कवि श्रवण मुकारुङलाई उपहार दिएर पुस्तक सार्वजनिक भएको घोषणा गरे । ‘स्मार्ट साइज’मा प्रकाशित उक्त भरियाको भूगोल काव्य कृतिको मूल्य रु २४५ रहेको छ । गीत र सङ्गीत क्षेत्रका स्रष्टाको लागि पलेटीले विगतमा एकल साँझ कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
सो अवसरमा कवि श्रवण मुकारुङले गद्य कविता क्षेत्रमा निकै ख्याति कमाउनु भएका कवि अधिकारीका कविता पाठकका लागि सरल र स्वादपूर्ण रहने गरेको बताए । भरियाको भूगोल कवि अधिकारीको १३ औँ कृति हो । पलेटीको यो शृङ्खला गीतकार दिनेश अधिकारी विशेष थियो र उनका नयाँ र पुराना नौ वटा गीतहरु मीना निरौला र योगेन्द्र उपाध्यायले प्रस्तुत गरे ।
गायन कार्यक्रमपछि कवि अधिकारीले शुक्रबार साँझ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आफ्ना नयाँ पुराना चार वटा कविता सुनाएर पलेटी कार्यक्रमको स्वादमा विविधता थप्नु भएको थियो ।
664 पटक पढिएको
मैले ठोकेरै भन्दैछु महोदय,यो सोच फेरीदेउ
मैले यसरी बुझे तिम्रो भडाउने बानी हुन सक्छ भरपु...
गाउँ छोडि शहर -कविता
गाउँको बाक्लो दुध शहरमा पचेन त्यो संस्कृति संस...
कहिले आगोले रोएँ कहिले पानीले रोएँ ! आखिर जहिले र...
एक्लाे दुनिया – कविता
कसले खोल्ने तगारो,कसले सोर्ने भकारो ? आजकालका युव...
कुन मन्त्रालयबाट कति गए अनाबश्यक विदेश भ्रमणमा ?
काठमाडौं । निजामति प्रशासनमा सरकारी भन्दा गैरसरकारी सहयोगमा विदेश भ्रमण उच्च रहे...
प्रचण्डले विभाजनको आधार खोजेपछि एकता घोषणा सभा प्रभावित भएको खुलासा
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थाप...
एमाले-माओवादी एकता कहाँ पर्‍यो गाँठो ?
काठमाडौं । बैशाख ७ गते शुक्रबारका लागि एमाले स्थायी समितिको बैठक करिव एक महिना ...
‘काम गरेर खानुजस्तो आनन्द मागेर खानुमा कदापी हुँदैन’
पर्यटकको बाक्लो उपस्थिति रहने काठमाडौँको बसन्तपुर । जहाँ साँझको समयमा घुंईचो नै ...
यो लडाइँमा सरकार झुक्ला कि यातायात व्यावसायी ?
काठमाडौँ । यतिबेला यातायात समिति दर्ता नगर्ने र नविकरण समेत नगर्ने सरकारको निर्ण...
भीआईपीका घरमा मनलाग्दी सुरक्षाकर्मी, कसको घरमा कति ?
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र भीआईपीले अझै घरमा मनपर्दी ढंगले दर्ज...
लोकेन्द्र खत्रीको ओछ्यान जोइ खोद्दाे देउडा गीतको भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं । गायक लोकेन्द्र खत्रीको नयाँ एल्बम् ओछ्यान जोइ खोज्दो देउडा गीतको भिडि...
प्रधानमन्त्री ओली गएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने सहमति
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणका विषयमा सहमति भएको छ । सन...
जति सिक्यो, त्यति नै सिक्न मन लाग्छः मोडल रमिता
रमिता भण्डारी विगत १६ वर्षदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा छिन् । बिचमा केही समय यो क्षे...
पेशा बुझ्ने र माया गर्ने भेटेको छैन्ः मोडल प्रतिक्षा
काठमाडौँ । विगत ४ वर्षदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा लागेकी प्रतिक्षा खड्का व्यस्त मो...